Ahoana ny fomba ahazoana Adobe XD maimaim-poana - Fampidinana maimaim-poana Adobe XD 2021 Malagasy Bible
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe XD Maimaim-Poana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2021-10-03, Malagasy Blog
MAIMAIMPOANA ADOBE XD
Adobe XD maimaim-poana dia fitaovana vaovao ho an'ny famolavolana UX / UI. Ny fahombiazana sy ny fahafaha-manao avo lenta dia mamela anao hamorona tetik'asa famolavolana sy prototype interface tsara ho an'ny fampiharana finday sy tranonkala maimaim-poana izao.
Tombontsoa amin'ny Adobe XD Free
Fandraisana madio madio
Famoronana votoaty mora ho an'ny UI
Ny haben'ny lahatsoratra dia miovaova toy ny Photoshop sy Illustrator
Tsy misy fanampiny plugins ilaina amin'ny prototyping
Fiverina fitaovana Grid
Inona no tafiditra ao amin'ny kinova Adobe XD alaina maimaimpoana?
Afaka mahazo maimaim-poana Download Adobe XD amin'ny Starter drafitra. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny drafitra, ianao dia hahazo 2GB ao amin'ny Creative Cloud sy tranomboky fototra an'ny Adobe Fonts, hatramin'ny zotram-drafitra iraisana iraisana iray ary prototype iraisana mavitrika.
ADOBE XD CONDITIONS VERSION MAIMAIMPOANA
Azonao atao ny mahazo ny drafitra Starter raha toa ka efa manana Adobe ID, Enterprise ID na Federated ID ianao. Azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny Experience Design CC miaraka amin'ny fanampian'ny CC Packager. Mifandraisa fotsiny amin'ny Administrator IT anao raha manana CC ho an'ny ekipa ianao na CC ho an'ny mpikambana ao amin'ny orinasa tsy misy fidirana fampiharana CC desktop.
Misy fihenam-bidy ho an'ny mpianatra / mpampianatra ve rehefa tapitra ny fitsarana maimaimpoana?
Eny, ny fihenam-bidy dia somary manaitra, fa tsy amin'ny XD ihany, saingy ny rehetra CC App fianakaviana. 60% izany!
Rafitra fiasan'iza no tohanan'ny XD?
izany azonao atao ny manamarin eo amin'ny Pejy takiana amin'ny rafitra.
Ahoana no fahazoako sy fametrahana azy?
Ho anao mila Adobe ID sy ny tenimiafina. Vakio ity lahatsoratra ity amin'ny fomba ahafahanao mametraka kinova taloha na mahita fanavaozana ho an'ny rindranasa Adobe anao.
Manana olana amin'ny fametrahana XD aho, inona no tokony hataoko?
Ity misy feno torolàlana momba ny famahana olana avy Adobe hamaly ny fanontaniana rehetra mifandray amin'ny download, fametrahana na ny olana vaovao.
Aiza amin'ny kinova XD no azoko ampiasana fametrahana sy fivoarana plugin?
Xd kinova 13.0 sy ambony dia hanohana ireo fiasa ireo.
Afaka mahazo plugins maimaim-poana ve aho?
Eny, tsy mila mandoa plugins ianao izao.
Sintomy ny Plugins Adobe XD maimaim-poana
Ahoana no fomba hamoronana plugin?
Ao amin'ny menio XD, mandehana any amin'ny Plugins > Fampandrosoana > Mamorona Plugin hanokatra ny console ho an'ny developer I / O.
Raha mila antsipiriany misimisy kokoa momba ny fomba ahafahanao mamorona, manandrana ary mampiditra anao ao anaty lisitry ny fampiharana dia vakio ity rakitra fanadihadiana momba ny developer Adobe XD ity.
Manana olana amin'ny fametrahana ny plugins-ko aho.
Manana ny Get Support endri-javatra ao an-Plugins izay mamela anao hifandray ny developer ary hitady vahaolana amin'ny olana ianao manana.
Eritrereto ny risika miafina ao amin'ny Adobe XD CC Crack
Mety hiteraka olana maro ny fampiasana rindrambaiko piraty. Ny ampahany ratsy indrindra, mety tsy fantatrao akory fa miaina olana ianao satria tsy dia miharihary daholo izany.
Cybercriminals dia mikendry PC vaovao any Azia Pasifika
Business Software Alliance dia nanombatombana fa fandaharana sy fampiharana fampiharana 3 amin'ny 5 napetraka amin'ny PC any Azia Pasifika no tsy ara-dalàna, noho izany dia manome solosaina PC marobe marobe ireo mpijirika mba hanampy amin'ny asan-dry zareo cyber.
Asia PC Fitsapana fividianana fividianana vao tsy ela akory izay ary nahita fa 83% amin'ny solosaina vaovao vaovao (izany hoe 4 amin'ny 5) ao amin'ny faritra dia namidy niaraka nametraka lozisialy tsy ara-dalàna ! Mbola bebe kokoa aza, 84% amin'ireo PC ireo no tonga niaraka tamin'ny malware. Ireo solosaina ireo dia nanana anti-virus ary Windows Defender tsy afa-miasa, izay nahafahana nampiasa fitaovana hack ho fampandehanana ity rindrambaiko tsy ara-dalàna ity. Tandindomin-doza ny olona nividy an'ireny PC ireny.
Ny vidin'ny fampiasana rindrambaiko piraty dia mety ho mafy kokoa noho ny vinavinaina
Misafidy ny hisintona ny Adobe XD ny olona mieritreritra fa mitahiry vola. Na izany aza, rehefa ela ny ela, ny vokany dia matetika ny mifanohitra amin'izany ary maro amin'izy ireo no miafara mandoa vola mihoatra noho izay tokony naloany ho an'ny kopia ara-dalàna.
Raha nandinika ny solosaina misy rindrambaiko tsy ara-dalàna efa napetraka, dia hitan'i Microsoft fa voan'ny Trojan sy viriosy avokoa izy ireo. Trojans dia mamela ny mpijirika hiditra amin'ny fitaovana, mangalatra angona manokana, raha toa ka afaka mamafa ny rakitrao ny virus, manala ny fampiharana fiarovana, mandefa spam ary misintona malware amin'ny PC.
amin'ny farany, mety ho lasa iharan'ny halatra mombamomba anao ianao na mila soloina ny solosainao.
Aza adino ny vintana ary ampiasao ny iray amin'ireo Fihenam-bidy amin'ny Adobe.
Arovy ny tenanao amin'ireo mpanao heloka bevava an-tserasera
Tsy misy fiarovana tsara kokoa amin'ireo mpanao heloka bevava amin'ny cyber noho ny fampiasana rindrambaiko ara-dalàna.
Raha mividy PC ianao dia alao antoka fa milaza amin'ny mpivarotra enao fa tsy mila rindrambaiko piraty ianao, ary alao antoka fa marina sy azo itokisana ny mpivarotra anao. Halaviro ny fifanarahana mampiahiahy.
Adobe XD Alternatives maimaim-poana
Raha te hanandrana fampiharana maimaimpoana bebe kokoa ianao amin'ny famolavolana azy, zahao ireo programa mahomby izay azonao ampiasaina maimaim-poana.
SINTOMY MOCKPLUS MAIMAIMPOANA
Trano famakiam-boky be mpiorina miaraka amina singa vonona hampiasaina
Prototyping haingana tsy misy kaody
3000+ sary masina SVG vaovao
Famoronana haingana ny wireframes / prototypes mifandray
Ny fanondranana ny endriny tsy misy afa-tsy amin'ny mpampiasa manana fisoratana anarana karama
Tsy tohanana amin'ny Linux
Nanapa-kevitra ny mpandrindra mockplus hanatsotra ny asa sarotra ary hamokatra rindrambaiko izay hamorona haingana ilay prototype tadiavinao. Azo ampiasaina ho an'ny Windows sy Mac izy io ary natao hampiasaina amin'ny famoronana sy famakafakana ireo prototypes finday, birao ary web-app.
Niezaka ny hampihena ny fotoana ilainy mba hamoronana prototype ireo mpandraharaha, ka tsy misy fitaovana fanampiny ao amin'ilay app, fa ireo tena ilaina indrindra.
SINTOMY SKETCH MAIMAIMPOANA
Vondron'ireo mpampiasa sy loharanon-karena mavitrika
Fahaizana miasa amin'ny fomba fijery marobe miaraka amin'ny "Artboards"
Mifototra amin'ny Vector sy mahafantatra ny pixel
Namboarina ho an'ny famolavolana UI sy ny onjam-piasa ho an'ny fampiharana tranokala sy finday
Fananana mora aondrana
Mila mividy fahazoan-dàlana ianao
sketch dia novolavolain'i Bohemian Coding, orinasa holandey, ho mpanonta sary. Ampiasaina indrindra ho an'ny UI sy UX famolavolana ny tranonkala sy ny fampiharana finday.
Ity rindrambaiko ity dia manana endrika .sketch manokana hamonjy rakitra, na dia azonao atao aza ny mampiasa ireo mahazatra kokoa, toa ny PNG, JPG, TIFF, WebP, sns. mamorona fampiharana sy tranokala.
SINTOMY FIGMA MAIMAIMPOANA
Mety ho fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy
Endri-javatra lehibe azo ampitahaina amin'ny Adobe XD
Azo ampidirina amin'ny Slack
Topi-maso mivantana amin'ny finday
Tsy mahomby ny workflow
Figma dia serivisy an-tserasera ho an'ny fampiroboroboana sy ny prototyping miaraka amin'ny fahafaha-miasa miaraka amin'ny fotoana tena izy. Izy io koa dia azo ampidirina amina Slack messenger an'ny orinasa sy Framer tool prototyping avo lenta. Ireo mpandraharaha Figma dia manambara ny rindrambaiko ho fifaninanana lehibe indrindra amin'ny vokatra Adobe prototyping.
Misy drafitra fisoratana anarana ity serivisy ity. Tetikasa iray ihany no azonao atao maimaim-poana. Ny mampiavaka ny Figma dia serivisy rahona tsy misy rindranasa ivelan'ny rindrambaiko. Tombontsoa iray hafa amin'ity fampiharana ity ny hoe cross-platform. Izany no zavatra tsy ananan'i Sketch sy Adobe XD, mpifaninana akaiky indrindra an'i Figma.
Sintomy ny Adobe XD Free
SINTOMY MAIMAIMPOANA ADOBE XD
Sintomy maimaim-poana ny Adobe XD raha mitady prototyping sy famolavolana milamina sy malefaka ianao. Azonao atao koa ny miara-miasa amin'ireo mpamorona hafa izay mampiasa ny kinova Adobe XD Windows na Mac. F
, handray soa ianao amin'ity rindranasa ity raha efa mampiasa vokatra Adobe ianao, toa ny Illustrator na Lightroom. Sintomy ny Adobe XD ho an'ny Windows na Mac ary ankafizo ny fahombiazana sy ny fahatsoran'ity rindrambaiko ity.
Read more about misy rindrambaiko sy rindrambaiko Adobe maimaimpoana.
Hevitra matanjaka Adobe XD